အသားရမ်းစားချင်နေတာ ဒီအချက်တွေကြောင့်ပါ - Hello Sayarwon
ဟဲလို……. အစားတလိုင်းလေးတို့ရေ အသားမှအသားစားချင်တယ်လို့များ ဖြစ်နေပြီလား…….. ဘာပဲစားစားအာသာမပြေဘူး။ အသားမှအသားပဲ စားချင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီလိုပြောရတဲ့အကြောင်းက အသားစားချင်နေတယ်ဆိုတာက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကို ပြနေတဲ့ အချက်တစ်ခုဖြစ်နေနိုင်တာကြောင့်ပါ။
အသားက ခန္ဓာကိုယ်က ကြွက်သားတွေနဲ့အရိုးတွေ ကြံခိုင်သန်စွမ်းစေဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တစ်ခုပါ။ ကိုယ်ခံအားကောင်းစေနိုင်သလို သွေးအားနည်းရောဂါတွေမဖြစ်အောင်လည်း အကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပရိုတင်းက ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ဓာတ်တွေထဲကတစ်ခုပေါ့။ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာစေဖို့အတွက်ဆိုရင် ပရိုတင်း၊ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်၊ ဗီတာမင် နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေကို ပြည့်ဝအောင်စားသုံးမိဖို့လိုပါမယ်။
အသားမှအသား စားချင်နေတာ ဘာကြောင့်များလဲ………….
တစ်နေ့တာမှာ အသားမပါရင် မစားနိုင်ဘူး။ ဘာစားစား အသားစားရမှ အာသာပြေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအချက်တွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်။
ဘာစားစား အာသာမပြေဘူး။ အသားစားလိုက်ရမှာအာသာပြေတယ်ဆိုတာ သင်ဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက အသားကိုနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်စားသုံးလာခဲ့တာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခြားဟင်းတွေထက်အသားဟင်းကိုမှ စားချင်နေတယ်ဆိုတာ သင်က တကယ့်ကို အသားကြိုက်သူမို့လို့ပါ။ ဒါကြောင့် အသီးအရွက်နဲ့ အသား၊ငါးကို မျှမျှတတစားသုံပေးဖို့ပြောပါရစေနော်။
ပရိုတင်းဓာတ်နည်းတာက အလွယ်တကူသိရှိနိုင်ဖို့ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိသာတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုက ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ပရိုတင်းနည်းလာတဲ့အခါ အရင်က အသားသိပ်မကြိုက်ရင်တောင်မှ အသားတွေအရမ်းစားချင်လာတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သိနိုင်တာတစ်ချက်ကတော့ ကိုယ်တွင်းမှာ ပရိုတင်းဓာတ်နည်းသူတွေဟာ ပုံမှန်ရှိသင့်တဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ထက်နည်းနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ခါတလေမှာ အသားတွေအရမ်းစားချင်နေတာက ကိုယ်တွင်းမှာ ပရိုတင်းဓာတ်နည်းနေတာကြောင့်ပါနော်။
အနီရောင် အသားတွေကိုမှစားချင်စိတ် တဖွားဖွားပေါ်နေတာရဲ့ နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ရပ်က ကိုယ်တွင်းမှာ သံဓာတ်အားနည်းပြီး သွေးအားနည်းနေတာကြောင့်ပါ။ သံဓာတ်အားနည်းတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်က ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တွင်းမှာ သံဓာတ်ပြည့်ဝစေဖို့အတွက် အနီရောင်အသား၊ ကြက်သား၊ ပင်လယ်ငါးတွေစားပေးလို့ရပါတယ်။ ဇင့်ဓာတ်ချို့တဲ့တာကလည်း အသားစားချင်စိတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတွေမှာလည်း ပုံမှန် အသားစားချင်စိတ်ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ အသားစားချင်စိတ်အရမ်းပြင်းပြနေမယ်၊ အိမ်ထောင်လည်းရှိမယ်ဆိုရင်တော့ ဆီးစစ်ကြည့်ပါ။ ဘေဘီလေးရှိနေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါ။
တစ်ခါတလေမှာ သင့်အနေနဲ့ အသားအရမ်းစားချင်နေတဲ့အကြောင်းက သရေစာတွေစားချင်နေလို့ပါ။ ချိစ်ဘာဂါ၊ ချိစ်ပီဇာနဲ့ အဆီတွေ၊ ပရိုတင်းတွေများတဲ့ အစားအစာတွေ၊ အငန်ကဲတဲ့အစားအစာတွေကို စားချင်နေတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း အသားစားချင်တဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ခါတလေမှာ အသားစားချင်တာက သရေစာကို အငမ်းမရစားချင်နေတာရဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ်ဆိုတာ သတိရပါ။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ အားတွေကုန်နေတဲ့အခါမှာ၊ သံဓာတ်အားနည်းနေတဲ့အခါ။ ပင်ပန်းနေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်း အသားစားချင်စိတ်အရမ်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ အသားအပြင် ငါး နဲ့ သံဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ ဟင်းနုနွယ်၊ ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေက သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အကောင်းဆုံးအားဖြည့်ပေးနိုင်မှာပါ။
အသားမှအသား စားချင်နေတယ်ဆိုရင် စားသာစားလိုက်ပါ။ ဒါမှ ခန္ဓာကိုယ်က လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေပြည့်ဝပြီး ကျန်းမာစေနိုင်မှာပါ။
Reasons Why You Might Be Craving Meat https://www.curejoy.com/content/why-am-i-craving-meat/ Accessed Date 19 November 2019
7 Weird Signs & Reasons Your Body Might Be Craving Meat, According To Experts https://www.bustle.com/p/7-weird-signs-reasons-your-body-might-be-craving-meat-according-to-experts-53127 Accessed Date 19 November 2019